ညို့အားပြင်း ပုံစံလေးတွေနဲ့ ပိုပိုရဲ့ အမိုက်စား Tik Tok ဗီဒီယို – Zartiman
ညို့အားပြင်း ပုံစံလေးတွေနဲ့ ပိုပိုရဲ့ အမိုက်စား Tik Tok ဗီဒီယို
“သီချင်း တွေကြောင့် ရှင်သန် လှပမဲ့သူ ♥️ပိုပို popo. .” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုတွေ ရှိလွန်းတဲ့ အမိုက်စားပုံလေးတွေအပြင် ညို့ အားပြင်းတဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်း ဝေ မျှ ထားပါတယ်နော်..။ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပိုပိုရဲ့ဖက်ရှင်ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ အ သည်းယားစရာဝန်ပန်လေးတွေဆော့ကစား ရိုက်ကူးထားတဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်း ပရိ သတ်ေ တွ သဘောကျနေကြမှာမို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေများစွာ ရရှိထားကာ ဆွဲအားပြင်းတဲ့ အသံ ချိုချိုအေးအေး လေးတွေနဲ့ သီချင်းကောင်းလေးတွေသီဆိုဖျော်ဖြေတတ်မှုတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အသိ အမှတ်ပြု ချစ်ခင်ခြင်း ရရှိထားပါတယ်..။
အနုပညာကိုဝါသနာပါပြီးဂီတကိုရူးသွပ်ခဲ့တဲ့ ပိုပိုကတော့ ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်းတွေနဲ့ကိုယ်ထူးကိုယ်ချွန်ကာ ပရိသ တ်တွေလက်ခံ အားပေးတဲ့ အဆိုတော်ကောင်းတစ်ယောက် ကြိုးစားခဲ့ပြီး အခုဆိုရင်အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့အနုပညာရှင်အဖြစ်ရပ်တည်ကာ သူမ ရဲ့ရည်မှန်းချက်လေးတွေကို အကောင် အထ ည်ေ ဖ်ာနေပြီဖြစ်ပါတယ်နော်..။သီချင်းကောင်းလေးတွေကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရေးစပ် သီဆို တတ်သလို လူငယ် ပီပီပျော်ပျော်နေပြီး Tik Tok ဗီဒီယိုလေးတွေလည်း မကြာခဏဆော့ကစားတတ်ကာ အချစ်ပိုစေတဲ့အပြင် သူမရဲ့လှု ပ်ရှား မှုလေးေ တွကိုလည်း အမြဲမျှဝေလေ့ရှိတာလည်း တွေ့ရပါတယ်..။
SOURCE : Po Po’s Tik Tok Acc
“သီခငျြး တှကွေောငျ့ ရှငျသနျ လှပမဲ့သူ ♥️ပိုပို popo. .” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ဆှဲဆောငျမှုတှေ ရှိလှနျးတဲ့ အမိုကျစားပုံလေးတှအေပွငျ ညို့ အားပွငျးတဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကိုလညျး ဝေ မြှ ထားပါတယျနျော..။ ခဈြစရာကောငျးလှနျးတဲ့ ပိုပိုရဲ့ဖကျရှငျပုံရိပျလေးတှနေဲ့ အ သညျးယားစရာဝနျပနျလေးတှဆေော့ကစား ရိုကျကူးထားတဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကိုလညျး ပရိ သတျေ တှ သဘောကနြကွေမှာမို့ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော..။အနုပညာလောကမှာ အောငျမွငျမှုတှမြေားစှာ ရရှိထားကာ ဆှဲအားပွငျးတဲ့ အသံ ခြိုခြိုအေးအေး လေးတှနေဲ့ သီခငျြးကောငျးလေးတှသေီဆိုဖြျောဖွတေတျမှုတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အသိ အမှတျပွု ခဈြခငျခွငျး ရရှိထားပါတယျ..။
အနုပညာကိုဝါသနာပါပွီးဂီတကိုရူးသှပျခဲ့တဲ့ ပိုပိုကတော့ ကိုယျပိုငျ အရညျအခငျြးတှနေဲ့ကိုယျထူးကိုယျခြှနျကာ ပရိသ တျတှလေကျခံ အားပေးတဲ့ အဆိုတျောကောငျးတဈယောကျ ကွိုးစားခဲ့ပွီး အခုဆိုရငျအောငျမွငျကြျောကွားတဲ့အနုပညာရှငျအဖွဈရပျတညျကာ သူမ ရဲ့ရညျမှနျးခကျြလေးတှကေို အကောငျ အထ ညျေ ဖျာနပွေီဖွဈပါတယျနျော..။သီခငျြးကောငျးလေးတှကေိုယျတိုငျဖနျတီးရေးစပျ သီဆို တတျသလို လူငယျ ပီပီပြျောပြျောနပွေီး Tik Tok ဗီဒီယိုလေးတှလေညျး မကွာခဏဆော့ကစားတတျကာ အခဈြပိုစတေဲ့အပွငျ သူမရဲ့လှု ပျရှား မှုလေးေ တှကိုလညျး အမွဲမြှဝလေရှေိ့တာလညျး တှရေ့ပါတယျ..။
ဆက်ဆီကျကျအမူအယာလေးနဲ့ ညစာအတူစားရအောင်ဆိုပြီး ပုရိသတွေကို ဖိတ်ခေါ်လိုက် တဲ့ နန်းမွေစံ(ဗီဒီယို)
G Fatt ရဲ့ ချစ် သူ အသစ် လေး လို့ နာမည် ကြီး နေတဲ့ အပေါ် အစွပ်စွဲခံရသူ ဘုံဘုံ ရှင်း ပြီ (ရုပ်/သံ)